» बिरामीको ब्यथा:अप्रेसन भनेर १५ घण्टा भोकै राखियो तर भएन…
बिरामीको ब्यथा:अप्रेसन भनेर १५ घण्टा भोकै राखियो तर भएन…
२७ चैत्र २०७५, बुधबार २१:०७ प्रकाशित
काठमाडौं । “अपरेसन गर्ने भनेर पन्ध्र घण्टा भोकै राखे तर गरेनन्,” बुधबार वीर अस्पतालको प्रांगणमा भेटिएकी पर्वतकी ३० वर्षीय इन्दिरा शर्माले दुखेसो पोख्दै भनिन् । गत पुसमा पेट दुख्ने समस्या देखिएपछि उपचारका लागि उनी वीर अस्पताल आएकी थिइन् । उनको पेटको इन्डोसकोपी गर्दा पित्तथैलीमा १५ एमएमका ढुंगा देखियो । उनको पित्तथैलीको शल्यक्रिया गुनपर्ने चिकित्सकले सुझाव दिए । चार महिनापछि अर्थात गत चैत २२ गते उनको शल्यक्रियाको समय तोकियो । उनी गत बुधबार नै आफ्ना दुई सन्तानलाई आफन्तको साथमा छोडेर शल्यक्रियाको लागि काठमाडौं आइन् । लामो समयको पर्खाइपछि आएको पालोमा बुधबार बिहान नै वीर अस्पतालमा भर्ना भइन् ।
चिकित्सकले बिहीबार बेलुकादेखि नै खाली पेट बस्न भनेका थिए । करिब पन्ध्र घण्टा भएको थियो केही नखाएको । चिकित्सकले शुक्रबार बिहान ११ बजेको शल्यक्रिया गर्ने समय दिएका थिए । सोही अनुसार शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सबै औषधीको व्यवस्था गरियो ।
नर्सहरुले उनलाई अप्रेसन थिएटरमा लैजान तयारी अवस्थामा राखेका थिए । तर एक्कासी चिकित्सकको सेवा-बहिष्कारका कारण शल्यक्रिया नहुने हल्ला सुनियो । उनले भनिन्, “एक जना नर्सले भन्नुभयो- आज डाक्टरहरुको आन्दोलन छ, अपरेसन नहुने भयो।”
उनलाई अस्पतालले फेरि बुधबार अर्थात आजका लागि समय दिएको थियो । तर उनी रहेको वार्डमा कोही पनि चिकित्सक चेकजाँच गरेर शल्यक्रियाको समय तोक्न आएका छैनन् । उनको शल्यक्रियाको मिति बिहीबार सारिएको भनेर जानकारी दिएको उनले बताइन् ।
“हामीले तिरेको करबाट उहाँहरु तलब खाने , अहिले उपचार सेवा नदिने ?,” उनले आक्रोश मिश्रित स्वरमा भनिन्, “शल्यक्रियामा आवश्यक अठार हजारको औषधी किनेर राखिएको छ । ”
सरकारी चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनका कारण उनको पित्तथैलीको ढुंगा आजसम्म पनि निकालिएको छैन । अस्पतालले गत चैत २२ गते शुक्रबार सातजना बिरामीलाई शल्यक्रियाको समय तोकेको थियो तर सोही दिन बिहान एक जनाको शल्यक्रिया भयो । त्यसयता कसैको पनि शल्यक्रिया नभएको ग्यास्ट्रो विभागले जनाएको छ । अन्य ६ जनालाई गत शुक्रबार नै दिउँसो आजबाट डाक्टरको आन्दोलन भनेर समय तोक्दै घर पठाइएको छ । “डाक्टरहरुको आन्दोलन छ भनेर समय दिँदै फकाईयो,” मलिन अनुहारमा उपस्थित इन्दिराले भनिन् ।
“डाक्टरले अस्पताल बन्द गर्दा शल्यक्रियाको समय लम्बिदा खर्च पनि बढ्छ । हामीलाई परेको मर्का कसले बुझ्ने,” उनले आक्रोश पोखिन् ।
कर्मचारी समायोजनमा आफूहरुलाई संघमा राख्नुपर्ने माग राखेर गत शुक्रबारदेखि नै देशैभरका चिकित्सकहरु आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका कारण उनको पित्तथैलीको ढुंगा आज निकालिएको छैन । विभिन्न जिल्लाबाट शल्यक्रियाका लागि लामो समयदेखि पालो कुरेका हजारौँ बिरामीहरुले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले शल्यक्रिया र टिकट लिइसकेका बिरामीलाई उपचार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले भने, “अस्पतालमा महिनामा करिब ५ सय जनासम्मको शल्यक्रिया हुने गरेको छ ।”
काठमाडौंका वीर, ट्रमा सेन्टर, कान्ती, शुक्रराजलगायतका अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामीले पनि सेवा पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाबाट रिफर भएर आएका बिरामीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । तर चिकित्सकहरु भने आफूहरूलाई संघमै समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को अगुवाईमा देशैभरका सरकारी अस्पतालका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन ।
(गोदान) को आह्वानमा भएको उक्त आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका विपन्न बिरामीहरु उपचारसेवाबाट वञ्चित भएका छन् । बुधबार अस्पताल पुगेर अलपत्र परेका कतिपय बिरामीहरुले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक-पटक गरिने हडतालले सर्वसाधारण जनता मारमा परेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन ।
त्यस्तै, गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने अहिले आएको समायोजनले चिकित्सकलाई मात्र होइन जनतालाई समेत असर गरेको बताए । उनले भने, “त्यसलाई नसच्याइए कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै चिकित्सक अभाव हुने देखिन्छ ।” बाह्रखरी
छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा सर्वनाम शिक्षालयका होस्टल वार्डेन जेल चलान